Pyrocumulonimbus nke oke okpomọkụ Canada na nsonaazụ ya | Network Meteorology
Na oge okpomọkụ na-arịwanye elu n'ụzọ ụfọdụ na mbara ala ebe enwere ihu igwe ọkụ. Nke a bụ ikpe na Canada. N'ihi oke ọkụ ọkụ nke akụkọ ihe mere eme na-eme na Canada, e nweela ọtụtụ ọkụ ọgbụgba pyrocumulonimbus. Ndị a bụ igwe ojii sitere na ọkụ na-enwe mmetụta na ikuku dị mma ịmụ.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere pyrocumulonimbus na akụkọ banyere ọkụ na ebili ọkụ na Canada.
1 Ebili ọkụ nke akụkọ ihe mere eme na Canada
2 Omume ihu igwe
3 Mmalite na njirimara nke pyrocumulonimbus
4 Nnukwu pyrocumulonimbus
Ebili ọkụ nke akụkọ ihe mere eme na Canada
Nsogbu Canada nwere oke okpomọkụ bụ na Mgbe oke ikuku ọkụ nke na-achọ ịkwụsị, ọzọ malitere. Ọnọdụ a ebutefeela oke okpomọkụ na-eme ka oke ohia nwee ike ịnwe ọkụ ọkụ. Ọkụ ndị a adịla ukwuu ma gbakwunye na ọdachi niile metụtara Canada.
Ọ bụghị naanị banyere ọkụ na-agbawa obi, mana mbido pyrocumulonimbus. Igwe ojii a na-ebute oke ọkụ na-emebi ihe nke, n'aka nke ya, na-akpata ọkụ ọhụrụ n'ihi amuma mmiri ọ na-eweta. Anyi aghaghi ighota na udiri igwe ojii ndia jikọtara ya na oku nwekwara udi ha nke ikuku. Igwe ụzarị ọkụ nke a na-ewepụta mgbe e guzobere pyrocumulonimbus dabara n'oké ọhịa ma gbakwunye na oge elekere nke okpomọkụ na akọrọ na gburugburu ebe obibi ọkụ na-aga n'ihu na mpaghara ahụ. Pyrocumulonimbus ndị ọzọ emeela ka ọkụ na àmụmà gbasiri ike nke yiri apocalypse.
Edebanyela ogo ruo ogo 49.6 na Canada n'oge a niile oge ọkụ a ga-adịgide. Thesekpụrụ ndị a na-abụkarị ezigbo obi ọjọọ, ọ bụghị naanị n'ihi ọnọdụ ala ha, kama ọ bụ n'ihi uru ahụ n'onwe ya. Ma nke ahụ bụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogo 50 nke okpomọkụ na 50ºN nke ohere. Nke a pụtara na anyị na-enwe oke okpomọkụ na Canada. Anyị ahụtụbeghị ọkwa okpomọkụ ndị a n'akụkụ ugwu nke mbara ụwa a rue ugbu a. Anyị na-ekwu maka ọnọdụ okpomọkụ nke edere site na ndekọ ihu igwe na ọnọdụ mmadụ.
Omume ihu igwe
Okpomọkụ dị na Canada abụrụla ihe omume ihu igwe dị egwu nke World Meteorological Organization kwupụtara. Ma anyị na-ekwu okwu banyere a ihe omume nke ugboro ugboro ya bụ otu puku iri puku afọ. Isi mmalite nke ebili mmiri bụ n'ihi iyi jet. Omume ya dịtụ ntakịrị mere ka ụdị okpomọkụ a dị n'akụkụ ugwu nke ugwu ugwu.
Anyị nwere ike ịkọwa ọnọdụ a ọkachasị ebe ọ bụ na ha bụ ihe ịtụnanya na-amarakwa na Spen. Ha bụ usoro nrụpụta ihe na-eme na ikuku n'oge ọkọchị. Mmalite nke okpomoku a mere na Oke Osimiri Pasifik. Isi ihe dị na nke a bụ n'eziokwu na ikuku ikuku a na-agbadata elu ka ọ na-aga n'ebe ọdịda anyanwụ Canada. Ngwongwo ikuku niile na-agbadata elu n'oge a na-ewepụ ebe a, ha mere usoro kpo oku site na mkpakọ adiabatic. Nọmalị ihe a na - emetụta ihe nhụjuanya nke ejikọtara na mgbochi mgbochi anticyclonic mepụtara na mpaghara a.
Mmalite na njirimara nke pyrocumulonimbus
Na mbụ anyị kwuru maka igwe ojii nke nhazi ya sitere na ọkụ na Canada. Okpomọkụ ahụ emeela ka oke oke oke ọkụ na oke mbibi oke ọhịa na-ebibi mpaghara ahụ dum na-ebibi ihe niile dị na ya. Nnukwu pyrocumulonimbus dị ukwuu ma dịkwa ọtụtụ. Ọbụghị ọkụ ọkụ apocalyptic na Australia nke afọ ndị gara aga emeela nnukwu igwe ojii dị egwu.
Ọ bụ ụdị ígwé ojii nke égbè eluigwe nke sitere na ya na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ. N'okwu ndị a, ọnọdụ ikuku zuru oke iji mepụta ụdị igwe ojii.
Ọ bụ otu ihe iji mepụta pyrocumulonimbus nke nha nkịtị nke ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-eme na ọkụ ọhịa. Dabere na okpomọkụ, njupụta nke ahịhịa na ọnọdụ ikuku, igwe ojii a nwere ike ibu ma ọ bụ pere mpe. Enwere ọtụtụ ihe omume pyroconveti metụtara ọkụ ọgbụgba, mana ọtụtụ ndị sayensị kwenyere na nke a bụ nke kachasị njọ nke hụtụrụla.
Ihe nke a bu oke oku nke meputara otutu puku oku na oku ohuru. Ọnọdụ jọgburu onwe ya nke ọnọdụ gburugburu ebe obibi a na nhazi Pyrocumulonimbus gbadoro ụkwụ na igwe ojii a na-ewepụta puku kwuru puku àmụ̀mà nke na-eme ka ọkụ gbaa ọzọ. Ngwurugwu a na-enye ọkụ nwere ike imebi oke ọhịa.
Anyị maara na ọkụ ọhịa bụ akụkụ nke okirikiri nke okike yana na enwere ahịhịa na-erite uru na ya. Otú ọ dị, mbibi dị otú ahụ ga-ewe ogologo oge iji weghachi. Ọ bụrụ na ọnọdụ ikuku zuru oke, pyrocumulonimbus nwere ike ịmepụta mesocyclone wee bụrụ pyrosupercell. Ọnọdụ ndị a nwere ike ibute oke mmiri ozuzo nke nwere ike ime ka nsogbu ahụ ka njọ. N'ịbụ ebe a na-ebugharị ebugharị, ọ nwere ike ịhazi ma mepụta nnukwu ọdachi.
Naanị ị ga-eche n'echiche ọgbọ nke igwe ojii nke nwere ike ịmepụta oke ikuku, àmụmà, ọkụ ọhụrụ, wdg. Ọ bụ ọdachi kpam kpam. A na-ahụ pyrocumulonimbus nke obi ọjọọ site n'elu ma bụrụ ihe nlere anya ịhụ.
Ekwesiri iburu n'uche na ụdị ihe ndị a dị njọ etinyela na mgbanwe ihu igwe n'ihi eziokwu nke inwe oke oyi na-adịghị ahụkebe na mpaghara ebe ọ na-adịkarị. Anyị na-ekwu maka ya Kanada n'ozuzu ya nwere okpomọkụ dị ala na ebe enwere oke snow kwa afọ. Na ụdị ohere a ọ bụ ihe ijuanya na ịnwe ọnọdụ okpomọkụ karịa usoro mbara igwe.
Dịka ị pụrụ ịhụ, oke ọkụ ọkụ nke Canada abụrụla ihe omume mere eme nke a ga-echeta n'akụkụ ọkụ Australia nke afọ ndị gara aga. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọrụ ọkụ Canada na pyrocumulonimbus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Pyrocumulonimbus na ebili mmiri na Canada